Shiinaha Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | HEX
Iyada oo ay leedahay saameyn antipyretic iyo antitussive.
Midhaha (oo loo yaqaan wolfberry ee dawada Shiinaha) waxay leedahay shaqo dawo oo lamid ah tan yeolfberry ee Ningxia; jilif xididka (loo yaqaan digubar in daawo dhaqameed Shiinaha) ayaa saameyn ku antipyretic iyo qufac qufaca.
Lysum barbarum polysaccharide:
Polysaccharide-ka 'Lycium barbarum polysaccharide' waa polysaccharide biyo-ku milma iyo waa waxyaabaha ugu firfircoon ee firfircoon ee ku jira Lycium barbarum. Qiyaasta molikuladeeda waa 68-200, taasoo noqotay goob cilmi baaris dal iyo dibadba. Kuwaas waxaa ka mid ah, qawaaniinta difaaca jirka iyo saameynta kahortagga burooyinka ee Lycium barbarum polysaccharide ayaa ah kuwa ugu badan ee la barto. Daraasado badan ayaa muujiyey in Lycium barbarum polysaccharide ay leedahay shaqooyinka kor u qaadista difaaca, gabowga, burooyinka, ka hortagga xagjirnimada bilaashka ah, anti-daalka, shucaaca ka hortagga, ilaalinta beerka, ilaalinta iyo hagaajinta shaqada taranka, iwm.
Magaca kiimikada waa 1-carboxy-N, N, N-trimethylaminohydantoin, oo la mid ah amino acids-ka qaab dhismeedka kiimikada wuxuuna ka tirsan yahay saldhigyada amine quaternary. Betaine waa mid ka mid ah alkaloids-ka ugu muhiimsan ee miraha wolfberry, caleen iyo jirida. Saamaynta wolfberry ay ku leedahay dheef-shiid kiimikaadka ama beerka ka hortagga dufanka waxaa inta badan keena betaine-ka ku jira, kaasoo u dhaqma sidii qeybiyaha methyl ee jirka ku jira. Cilmi-baarista ku saabsan Lycium barbarum betaine waxay ku kooban tahay cilmi-baarista gudaha ee ku saabsan go'aaminta nuxurka, tikniyoolajiyadda soo-saarista iyo saameynta jir ahaaneed ee dhirta Lycium barbarum (xoojinta dulqaadka milixda). Waxaa jira daraasado kooban oo ku saabsan saameynta dawooyinka ee daawada 'Lycium barbarum betaine'
Shiino Wolfberry ah